धरापमा निकुञ्जका मध्यवर्ती क्षेत्रः जोगाउने कसरी ? मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनमा अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्न हिजोको कानूनी व्यवस्थाले नसक्ने भएकाले संयुक्त रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कानून निर्माण आवश्यक छ।
शिक्षण विधि सुधार्ने अवसर हुनसक्छ महामारी अधिकांश विद्यार्थीलाई अनलाइनको पहुँचमा ल्याउन पक्कै समय लाग्छ। महामारी त्यसका लागि अवसर हुनसक्छ। तत्कालै सय प्रतिशत लागू गर्नुपर्छ भन्ने सोच नराखी यतातर्फ अग्रसर हुनु जरुरी छ।
किन हुन्छन् वैदेशिक सहयोग सम्झौता विवादित ? के हो समाधान ? वैदेशिक सहयोग तथा अनुदान प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा हाम्रो आन्तरिक प्रणालीमा रहेका अपूर्णता वा अस्पष्टता चिर्ने गरी नयाँ संविधानको मर्म अनुसार कानूनी संरचना बनाउनु अत्यावश्यक छ।
यसरी संसारलाई शासन गर्दैछ बहुराष्ट्रिय कम्पनी करीब एक हजार बहुराष्ट्रिय कम्पनी विश्वका आर्थिक नीतिका कारखाना पनि हुन् । उनीहरू जे चाहन्छन्, धेरैजसो मुलुक त्यसै गर्न विवश छन् । चीन, भारत वा अरू उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देश समेत यिनै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको खुट्टामा उभिएका छन् ।
अनलाइन कक्षा बन्दः तनावमा शिक्षक, सौदाबाजीमा विद्यालय सञ्चालक महामारीका कारण यतिबेला सबै क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएका छन् । सामुदायिक विद्यालय क्वारेन्टिनमा परिणत भएका छन् । कक्षाकोठामा पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन । निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा बन्द गरेपछि अहिले देशमा औपचारिक पठनपाठन ठप्प छ ।
कोही गरीब भेन्टिलेटरमा बस्नु नपरोस् ! एक त देशभित्र आवश्यक भौतिक पूर्वाधार नहुनु र अर्कोतर्फ गुणस्तरीय उपचारमा सीमित वर्गको मात्र पहुँच हुनु कोरोना महामारीका लागि घातक हुनसक्छ ।
सलहले सखाप नपारोस् ! कोभिड–१९ मा जस्तै सलह पूर्वानुमानमा पनि सरकारी अनुमान असफल भइसकेपछि अब पुनः अर्को गल्ती गर्नुअघि कम क्षति हुने तयारीमा जुट्नु बुद्धिमानी हुनेछ।
डोनाल्ड ट्रम्प आफैं बनाउँदैछन् चुनाव हार्ने आधार सन् २०१६ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवार भएसँगै डोनाल्ड ट्रम्पले विभाजनको राजनीति शुरू गरे। काला र गोरा, आप्रवासी र मूलवासी जस्ता सीमा कोरेरै उनले चुनाव जिते।